MCN TV NEWS [MYANMAR CHANNEL NEWS] Видео
🎬 All videos MCN TV NEWS [MYANMAR CHANNEL NEWS]
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ (၂၉) ရက် တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးခန်း အစီအစဉ်...
🎬 MCN TV NEWS [MYANMAR CHANNEL NEWS] 📅2hou.
🎬 MCN TV NEWS [MYANMAR CHANNEL NEWS] 📅 13 hou.
ဦးတီခွန်မြတ် အပေါ် စွပ်စွဲချက်တွေကို ထိရောက်တဲ့ ချေပရှင်းလင်းမှုမျိုးတွေ ပေါ်ပေါက်လာမယ်...
🎬 MCN TV NEWS [MYANMAR CHANNEL NEWS] 📅 15 hou.
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ၏ ဆောင်ရွက်ချက် ဥပဒေနဲ့ ညီ၊ ဘက်လိုက်မှုမရှိ၊ တာဝန်ကြေ- ဆက်လက်ထောက်ခံမည်...
🎬 MCN TV NEWS [MYANMAR CHANNEL NEWS] 📅 16 hou.
🎬 MCN TV NEWS [MYANMAR CHANNEL NEWS] 📅 20 hou.
THE STREAMIZ SHOW WITH U YE TUN (THIPAW)
🎬 MCN TV NEWS [MYANMAR CHANNEL NEWS] 📅 21 hou.
ကိုဗစ် တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက် အကူအညီပေးရေး ဆရာဖြစ်သင်တန်း ဖွင့်လှစ်
🎬 MCN TV NEWS [MYANMAR CHANNEL NEWS] 📅 1 day.
အိမ်တွင်းဖြစ် ချည်ထည် Mask ပြိုင်ပွဲတွင် ပထမဆုရှင်များနှင့် ဆွေးနွေးခန်း (Live)
🎬 MCN TV NEWS [MYANMAR CHANNEL NEWS] 📅2day.
မုံရွာမှာ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်နှင့် စားသောက်ဆိုင်တွေ ဆိုင်ထိုင်စနစ်နဲ့ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်
🎬 MCN TV NEWS [MYANMAR CHANNEL NEWS] 📅4day.
မုံရွာမြို့ဗောဓိတထောင် ဆင်စခန်းက ဆင်တွေကို တောထဲသို့ ယာယီရွှေ့ပြောင်း
ကျေးရွာတွေမှာ မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ဖို့ အပေါ့စားမီးသတ်စက်တွေ ပေးအပ်
ရွှေဘိုမြို့နယ်က Quarantine Center မှာ သေဆုံးခဲ့သူမှာ (ကိုဗစ်-၁၉) ရောဂါပိုး မတွေ့ရဟုဆို
(ကိုဗစ်-၁၉) ကာကွယ်ရေး ကျေးလတ်ပြည်သူတွေကို ကျန်းမာရေးအသိပညာပေး
🎬 MCN TV NEWS [MYANMAR CHANNEL NEWS] 📅6day.
တန်ဘိုးနည်း အကာအကွယ်ဝတ်စုံ PPE နဲ့ Mask ထုတ်လုပ်
သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရတဲ့ လယ္ယာနဲ႔အိမ္ျခံေျမေတြ အတြက္ နစ္နာေၾကးေတြ အခုခ်ိန္ထိ မရရွိေသး
ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ယာဥ္ထိန္းရဲေမမ်ား တိုးခ်ဲ႕တာ၀န္ထမ္းေဆာင္
(ICJ) ကို တင်မယ့် ကြားဖြတ်အစီအမံ ပထမဆုံး အစီရင်ခံစာမှာ ဘာတွေ ဖော်ပြဖို့ လိုလဲ
🎬 MCN TV NEWS [MYANMAR CHANNEL NEWS] 📅7day.
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းစစ်နှင့် မူယစ်ဆေးဝါးပြဿနာ (သုံးသပ်ချက်)
🎬 MCN TV NEWS [MYANMAR CHANNEL NEWS] 📅 1 wee.
အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏ မေလ ၂၂ ရက် စကားဝိုင်း
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းစစ်သမိုင်းနှင့် မူယစ်ဆေးဝါးပြဿနာ (သုံးသပ်ချက်)
ယင်းမာပင်မြို့နယ်က မီးဘေးသင့်ပြည်သူတွေ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး အခက်တွေ့နေ
အဆင့်မြင့် စက်မှုလယ်ယာမြေစနစ် ဝက်လက်မှာ အကောင်အထည်ဖော်
ကျောင်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးခန်း [၁၉ မေ ၂၀၂၀ ခုနှစ်]